Shiinaha CAS 9032-42-2 HEMC oo loogu talagalay waxyaabaha la qabatimay dhismaha iyo soo saaraha |Longou
CAS 9032-42-2 HEMC ee balwadaha dhismaha
1. HEMC hydroxyethyl methyl cellulose waxa laga sameeyaa cellulose cudbi ah oo aad u saafi ah.Ka dib daawaynta alkali iyo etherification gaar ah waxay noqotaa HEMC.Kuma jiraan dufan xayawaan ah iyo maaddooyin kale oo firfircoon.
2. Muuqaalka HEMC waa qaybo cad ama budo, aan ur lahayn oo aan dhadhamin.Waa hygroscopic mana ku milmi karto biyo kulul, acetone.ethanol iyo toluene.Ka dib barar biyo qabow oo galay xal kolloidal ah, milmintu ma saameynayso qiimaha PH.Waxay la mid tahay methyl cellulose, laakiin kororka kooxaha hydroxyethyl, waxay leedahay dulqaad badan, si fudud ugu milmi biyaha waxayna leedahay heerkul sare oo heerkul ah.
3. Hemc waxa uu ka ciyaaraa door dhumucdi, ilaalinta biyaha, kaas oo aad ugu haboon fr biyaha ku salaysan qalabka dhismaha rinjiyeynta, khad iyo saliid qodis.
4. Wax-qabad wanaagsan oo loogu talagalay walxaha budada ah.Waxaa loo isticmaalaa sida wakiilka jeling, wakiilka biyaha ee senti iyo gypsum.
Waxyaabaha lagu daro dhismaha HEMC 1
Magaca Hydroxyethyl methyl cellulose
Methyl ka kooban yahay 22.0--32.0 (%)
Heerkulka xuubka 60--90 (°C)
Hadhaaga (Ash) ≤3(%)
Viscosity (2% xal) 400--20 00000S (mPa.s, NDJ-1)
1. HEMC waxa ay door ka ciyaaraa dhumucdi, ilaalinta biyaha, taas oo aad ugu haboon rinjiyeynta biyaha ku salaysan, qalabka dhismaha, khad iyo qodista saliidda.
2. Wax-qabad wanaagsan oo loogu talagalay walxaha budada ah.Waxaa loo isticmaalaa sida wakiilka jeling, wakiilka biyaha cement, gypsum.
3. Waxa loo isticmaalaa sida wax lagu daro koollada ilkaha, waxyaalaha la isku qurxiyo iyo saabuunta.
Ku kaydi xirmada asalka ah meel qalalan oo qabow.Ka dib marka la furo wax soo saarka, waa in si adag loo xiraa sida ugu dhakhsaha badan si looga hortago in qoyaanka soo galo;
Hore: Viscosity sare HEC loo isticmaalo qodista batroolka
Xiga: CAS 9004-34-6 fiber cellulose ee dhismaha
Balwad Wacan oo loogu talagalay Budada Hemc
Gypsum iyo Sibidhka Waxyaalaha lagu daro Kiimikada
Wakiilka Dhumucda Rinjiyeynta Biyaha Ku Salaysan
Wakiilka sare ee ilaalinta biyaha ee dhismaha h...